Chineke Adịghị Ele Mmadụ Anya n’Ihu | Bịaruo Chineke Nso
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ò nwetụla mgbe a na-enyeghị gị ihe ruuru gị ma ọ bụ ghara imere gị ihe e kwesịrị imere gị ma ọ bụkwanụ kparịa gị n’ihi otú akpụkpọ ahụ́ gị na-acha, obodo i si, ma ọ bụkwanụ n’ihi na ị bụghị onye a ma ama? Ọ bụrụ na e metụla gị ụdị ihe a, buru n’obi na ọ bụghị naanị gị ka e metụrụla ya. Ma, e nwere otu ihe ga-eme gị obi ụtọ. Ị̀ ma ihe ọ bụ? Ọ bụ na ịkpa ókè a juru ebe niile n’ụwa adịghị n’eluigwe. Pita onyeozi kwuru hoo haa, sị: “Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu.”—Gụọ Ọrụ Ndịozi 10:34, 35.
Ebe Pita nọ kwuo ihe a bụ ebe mmadụ na-agaghị atụ anya na ọ ga-anọ kwuo ya, ya bụ, n’ụlọ onye Jentaịl bụ́ Kọnịliọs. Pita bụ onye Juu. Ọ dịrị ndụ n’oge ndị Juu weere ndị Jentaịl ka ndị na-adịghị ọcha na ndị ha na ha na-ekwesịghị imekọ ihe ọ bụla. Gịnị meziri Pita ji gaa n’ụlọ Kọnịliọs? Ọ bụ Jehova Chineke gwara ya gaa ebe ahụ. E nwere otu ọhụụ Chineke mere ka Pita hụ. Chineke gwara ya n’ọhụụ ahụ, sị: “Kwụsị ịkpọ ihe Chineke mere ka ha dị ọcha ihe rụrụ arụ.” Pita amadịghị na otu ụbọchị tupu ya ahụ ọhụụ ahụ, na mmụọ ozi agwala Kọnịliọs n’ọhụụ ka o dunye ndị ozi ka ha gaa kpọọ ya. (Ọrụ Ndịozi 10:1-15) Mgbe Pita ghọtara na ọ bụ uche Jehova ka ọ gaa n’ụlọ Kọnịliọs, ọ gara gwa Kọnịliọs na ndị ezinụlọ ya Okwu Chineke.
Pita kwuru, sị: “N’ezie, ana m aghọta na Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu.” (Ọrụ Ndịozi 10:34) Otú e si dee okwu Grik a sụgharịrị ‘ile mmadụ anya n’ihu’ bụ “ile ihu.” Otu ọkà mmụta kwuru banyere okwu Grik ahụ, sị: “A na-eji ya akọwa mgbe ọkàikpe lere mmadụ anya n’ihu kpelaara onye ahụ ikpe ma ọ bụkwanụ ma onye ahụ ikpe, kama ilekwasị anya n’ihe ndị merenụ kpee ikpe ahụ.” O nweghị agbụrụ ma ọ bụ mba Chineke hụrụ n’anya karịa ibe ya, ọ naghịkwa ahụ ndị nwere ego n’anya karịa ndị ogbenye.
Kama nke ahụ, ihe Jehova na-ahụ bụ ihe dị anyị n’obi. (1 Samuel 16:7; Ilu 21:2) Ihe ọzọ Pita kwuru bụ: “Ná mba ọ bụla, onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anabata nke ọma.” (Ọrụ Ndịozi 10:35) Onye na-atụ egwu Chineke na-akwanyere Chineke ùgwù ma tụkwasị ya obi. Onye ahụ anaghịkwa eme ihe ga-ewute Chineke. Ime ezi omume pụtara mmadụ isi n’ala ala obi ya na-eme ihe dị mma n’anya Chineke. Ọ bụrụ na mmadụ ji obi ya niile na-eme ihe ziri ezi n’ihi na onye ahụ achọghị ime ihe ga-ewute Jehova, Jehova ga-ahụ onye ahụ n’anya.—Diuterọnọmi 10:12, 13.
Ọ bụrụ na Jehova esi n’eluigwe lee anya n’ụwa, ihe ọ na-ahụ bụ na anyị niile bụ otu ndị, ọ bụghị ndị si n’agbụrụ dị iche iche
Ọ bụrụ na o nweela mgbe e megburu gị ma ọ bụ kpọọ gị asị, biko, ka ihe Pita kwuru banyere Chineke kasie gị obi. Jehova si ná mba dị iche iche na-adọta ndị mmadụ ka ha bịa fee ya. (Jọn 6:44; Ọrụ Ndịozi 17:26, 27) Ọ na-anụ ekpere nke ndị niile na-efe ya na-ekpegara ya n’agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ mba ha si, ma hà nwere ego ma ọ bụ na ha enweghị. (1 Ndị Eze 8:41-43) Mara na ọ bụrụ na Jehova esi n’eluigwe lee anya n’ụwa, ihe ọ na-ahụ bụ na anyị niile bụ otu ndị, ọ bụghị ndị si n’agbụrụ dị iche iche. Ọ̀ bụ na ị gaghị achọ ịmatakwu banyere Chineke a nke na-adịghị ele mmadụ anya n’ihu?
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na baịbụl n’ọnwa Jun
Jọn 17-21–Ọrụ Ndịozi 1-10